किन छ खीरको महत्व,कसरी बनाउने स्वादिष्ट खीर ? यस्ता छन् फाइदा - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । साउन महिनामा हिन्दु धर्मावलम्बी महिलाहरू सोमबार व्रत बस्छन्। साउन महिनाभरि हिन्दु धर्मावलम्बीहरू साकाहारी हुने गर्छन्। त्यसैले साकाहारी महिनाको रूपमा चिनिने साउनका लागि खीर उपयुक्त परिकार मानिन्छ। त्यसो त साउन १५ लाई खीर खाने पर्वको रूपमा लिइन्छ। तीज, श्राद्ध, देवाली, ब्रतबन्ध, भोजभतेर जस्ता शुभ अवसरमा विशेष परिकारका रूपमा पकाइने गरिएको खीरलाई स्वादिष्ट एवम् स्वास्थ्यवर्दक खानाको रूपमा लिइन्छ। शुद्ध, स्वास्थ्यवर्दक तथा खान सहज भएकै कारण बच्चाको अन्न खुवाई सुरुवात समेत खीर खान लगाएर गरिने प्रचलन छ।
असार २४ । खोटाङ, जिल्लाको दक्षिणी गाविस खिदिमाका बाढीपीडितले पुनर्वासको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन् […]
गृह राज्यमन्त्रीकै गाडीको नम्बर प्लेट फर्जी
भदौ १३, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयको काम नक्कली गाडी नियन्त्रण गरी कानूनी कारबाही गर्नु हो । तर, उल्टै गृह […]
झापाको तोपगाछी गाविसको वडा नं ७ र ५ जोड्ने ढयाग्रे खोलाको पुल शिलान्यास गर्नुहुँदै नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा […]
के तिम्लाई छिमेकी भन्न जरुरी छ र?-महेश्वर शर्मा
महेश्वर शर्मा, सिड्नी अस्ट्रेलिया, कविता, के तिम्लाई छिमेकी भन्न जरुरी छ […]
कहिले छाड्छन् देउवाले सत्ता ? आलटाल कांग्रेसको वंशाणुगत रोग कि बाध्यता
काठमाडौं । सरकारले यथाशीघ्र सत्ता हस्तान्तरणको वातावरण बनाउन राजनीतिक दल तथा सम्वद्ध निकाललाई आग्रह गरेको छ […]
लम्जुङ समाज अस्ट्रेलियाको नयाँ बर्ष भेटघाट कार्यक्रम
सिड्नी । लम्जुङ समाज अस्ट्रेलियाले नयाँ बर्ष २०७३ को उपलक्ष्यमा सिड्नीमा बृहत भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना […]